I-WST-001-1-1/1-I-S-S-S-STOOOR YABALALI BARBECINA IGADI | Zhongshan Well Sure Metal Product Co., Ltd
I-Steak / Maker yePizza
I-spit roaster / i-spit vierisserie
I-Gridle / Teppanaki
I-Peel ye-Pellet Grill
I-WST-001-5-1 Ukuthengisa okuphezulu kweKikhi yeKight Stainess Stainess Stainess Stainess Ikhabhathi kunye ne-BBQ Grill
I-WST-CF2 ngaphandle ikhitshi lasekhitshini le-CORCHEADRAOD I-STAYCH ye-BBQ ye-BBQ ye-BBQ ye-Bbq
I-WST-001-1-1 I-China i-Exible Promer yesiko le-BBQ le-BBQ yentsimbi ye-BBQ ye-Korear yaseKitchen Barbecue Gril
I-WST-001-1-1/1-I-S-S-S-STOOOR YABALALI BARBECINA IGADI
1.6 Abatshisi, i-1 yecala eli-1, kunye ne-1 infrared burner
Iyonke i-90000btu yokupheka ibonelela ngemisebenzi ye-Grill, umsi, braise, ibhakiwe, ilolo ngaxeshanye, kwaye iphumelele incasa kunye nencasa ye-fluaces
2.Iyavutha i-Staight Lid ye-Staight Staight-Wid yoBushushu
Eyakhelwe i-thermometer iqinisekisa imilinganiselo yobushushu yobushushu be-Guill
Inika indawo eyongezelelweyo ye-prep kunye nendawo yokusebenza
Ungakonwabela i-barbecue nkqu nobusuku obumnyama
5.Uhlobo oluzenzekelayo lwe-360 ° I-turesisserie
Ukhenketho ngokulinganayo ukuze ukutya kulula ukutshiswa
6.cabibit kunye neengcango zentsimbi ezingenasitayile
Ukugcina izixhobo ze-BBQ kunye nebhotile yegesi yerhasi
Ifowuni: +86 760 86337286
Indawo yokupheka I-960 * 455mm
Imveliso yokuphuma I-90000btu / 30.5kw
Imveliso yemoto 4w (220-240V, AC5Hz), 2.5or3r / Min
Ukwakhiwa Intsimbi engenalo intsimbi kunye ne-granite
Intsebenzo I-Grill-kwi-grill ye-26.7kw, eBurner Burner 3.9kw
Ifriji I-68l, 220-20v / 50hz,
Isixhobo # 304/430 intsimbi engenasibala
Inqaku Ihlanganisene ngokulula, icocwe ngokulula
Isicelo Igadi / yeqela / ngaphandle
Isixhobo sokhuseleko Isixhobo sokhuseleko selanga
Ukugqiba Inkqubo yeMatte
Umsebenzi I-BBQ, Maker Steak, inkukhu yenkukhu
Ubushushu I-350 ℃
Ukujonga iwindow iglasi evuthayo
I-vississerie iseti viotsesserie rod, i-rotisserie prong, i-rotusserie motor
Iigridi zokupheka I-8mm yentsimbi yentsimbi, i-3PCS
Ibhotile ivuliwe I-1pc
Itreyini ye-drip I-2PCS, intsimbi engenanto
Ulawulo lobushushu I-valves nge-180 ° Ukulawula
Izibane Yakhelwe i-Harkn yeHalogn ye-2PCS kunye nokukhanya kwe-knob Ii-6PCs
IKhabhinethi Iidreyikhi ezi-2 kunye ne-3 Fighn
◪ I-ECLATAL ingumenzi wobungcali ekuveliseni i-BBQ Rills / Graills yegesi / i-pizza ye-pizza / i-pizza ye-pizza / i-charcoal gills / i-pits ye-offset / imililo kunye ne-BBQ Deces kwiminyaka eli-15.
◪ Sinikezela zombini i-OEM& Iinkonzo ze-ODM, iintsuku ezi-4-7 zomsebenzi zeesampuli zesampulu.
◪Sinenkqubo egqibeleleyo yolawulo esemgangathweni. Singanikezela ngeemveliso ezincomekayo& Isicwangciso esingcono sokuthengisa.
◪ Sinezatifikethi ezigcweleyo ezibandakanya i-En1860-1, GS, LE,.
◪ Singabonelela ngeenkonzo zokuthengisa emva kwentengiso kunye neenkonzo ezikwi-intanethi, kwaye sinike ixabiso lohlahlo-lwabiwo mali ukuze sihlangabezane nesicelo sakho.
1. Yeyiphi imveliso onokuyivelisa?
Singavelisa i-rill ye-barbecue yentengiso, eyakhiwe-irill, igesi yegesi, i-Grill ephathwayo, ikhitshi engaphandle, i-pizza kunye ne-steisser, i-stisserie kunye ne-fitserserie kunye nokunye.
2. Ngaba ungayivelisa ngokweesampulu okanye imizobo?
Ewe sinako ukuvelisa ngokweesampulu zakho okanye imizobo yezobugcisa. Sine r&Iqela elingaphezulu kweminyaka eli-10 kwingingqi ye-BBQ.
3. Ithini intlawulo yakho?
Ngokubanzi, samkela i-t / t, engenakrelekrele i-L / c ngasekuqaleni. Kwi-odolo rhoqo, samkela i-T / T 30%% yediphozithi nge-P.O., ibhalansi ukuba ihlawulwe ngaphambi kokuba ithunyelwe.
4. Leliphi ixesha lakho lokukhokelwa kwesampulu kunye nemveliso?
Isampulu, ihlala ithatha iintsuku ezingama-7-15. Ngomyalelo wokuvelisa, ihlala ithatha iintsuku ezingama-40 ukuya kwengama-6 emva kwesiqinisekiso sesampulu kwaye ufumane intlawulo yakho kwangaphambili. Ixesha lokuhanjiswa ngokuthe ngqo lixhomekeke kwizinto kunye nobungakanani bomyalelo wakho.
5. Yintoni ukupakishwa kwakho ngokubanzi kweemveliso?
Sihlala sipakisha iimveliso ngebhokisi yebhokisi esemgangathweni yenqwelomoya kunye nebhokisi yokhuni. Singapakisha ngendlela ngokwemfuno yomthengi.
6. Ithini imigqaliselo yakho?
Samkela i-Exww, iFoB, iTif, njl njl.
7. Lude kangakanani ubomi bakho beemveliso zakho?
Iminyaka emi-3 ukuba iimveliso zisebenzisa ngendlela eyiyo kwaye zigcine ngokufanelekileyo.
8. Lide kangakanani iwaranti yeemveliso zakho? Kuthekani ukuba kukho amanye amalungu aphukileyo?
Iwaranti yethu ngunyaka omnye. Ngaphakathi kwewaranti, iinxalenye ezaphukileyo zinokutshintshwa ngokukhululekileyo.
9. Ndingalifumana nini ixabiso?
Kwiiyure ezingama-24 emva kokufumana ingxelo yakho. Ukuba ungxamisekile, nceda uthumele i-imeyile kuthi okanye ishiye umyalezo kwi-SEASR MALIRE, ukuze sikuphendule ngexesha.
10. Ndingayifumana njani isampulu yokujonga umgangatho wakho?
Emva kwesiqinisekiso sexabiso, unokufuna iisampulu ukukhangela umgangatho wethu. Ukuba ufuna iisampulu kunye ne-logo yakho, uyilo, njl njl., Nceda unikele ezi nkcukacha, ngenxa yoko sikunika umrhumo wesampulu. Ngokwesiqhelo intlawulo yesampulu iphindwe kabini ngexabiso lexabiso le-bulk. Ukubuya kwentlawulo yesampulu kuxhomekeke kubungakanani be-bulk ye-bulk. Ubungakanani bendlela yoku-odola ithatha isigqibo sokuba intlawulo yemodeli ibuyisiwe okanye ibuyela nje isiqingatha.